लैंगिक समानता र समावेशीता भएन |
लैंगिक समानता र समावेशीता भएन
प्रकाशित मिति :2015-07-14 20:09:26
ललितपुर, असार २९। अर्थशास्त्री डा. मीना आचार्यले लैंगिक समानता र समावेशीतालाई बजेटले कत्तिपनि नछोएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेटका सम्बन्धमा महिला खवर डटकमसँग कुरा गर्दै डा. आचार्यले महिला कै लागि विशेष कार्यक्रम तोकेर नआएको र आएका कार्यक्रममा पनि बजेट नतोकिएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट नीतिका रुपमा आउँथ्यो तर यसपाली त्यसरी आएन।
‘ युवाका लागि कार्यक्रम र बजेट तोकेरै आएपनि महिलाका लागि नआएको उहाँको भनाई थियो। ‘बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएपनि ५७ प्रतिशत महिला कृषि मजदुरलाई सम्बोधन गरिएन’ उहाँले भन्नुभयो।
नेपाली काग्रेंसका सभासद सीता गुरुङले ‘महिला हिंसा न्यूनिकरण, स्वास्थ्य, शसक्तिकरण र आत्मनिर्भर बनाउने खालको महिला अनुकूल बजेट नआएको’ प्रतिक्रिया दिनुभयो। भूकम्पपछि विस्थापित हुने महिला तथा बालबालिका धेरै भएपनि उनीहरूको पुर्नस्थापना र जिविकोपार्जनका लागि स्पष्ट बजेट नआएको उहाँको भनाई थियो।
नेकपा एमालेका सभासद गरिमा शाहले बजेट महिला केन्द्रित नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। महिला लक्षित बजेट नआएको र यसले ५१ प्रतिशत महिलालाई सम्बोधन नगरेका उहाँको भनाइ थियो। तर महिला उद्यमशीलता कोष १० जिल्लामा विस्तार गर्ने र बृद्ध भत्ता बढाउने खालका कुरा भने प्रशंसायोग्य भएको उहाँले बताउनुभयो।
एमाओवादी सभासद रुपमा महर्जनले महिला सशक्तिकरणका लागि ठोस बजेट नआएको बताउनुभयो। उहाँले यो बजेट सबैलाई खुशी पार्ने गरी पुरानै तरीकाले ल्याइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाले भन्नुभयो, ‘बजेट महिला मैत्री मात्र नभएको होइन, अरु बिशेष कार्यक्रम पनि छैनन्।’